आज - ०६ भाद्र २०७६ शुक्रवारको राशिफल - Everest Dainik - News from Nepal
आज – ०६ भाद्र २०७६ शुक्रवारको राशिफल
२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार
मेष– आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धाबाट लाभ हुने छैन । यात्रामा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ ।
बृष– महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । कुविचारमा मन जाला । नजिकको व्यक्तिबाट धोका पाईन सक्नेछ सचेत रहनुहोला । मन कमजोरपनि रहला ।
मिथुन– प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ । काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस शुक्रबार कस्तो छ तपाईंको भाग्य ? पढ्नुस् राशिफल
कर्कट– प्रेम सम्बन्ध कसिलो होला । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । बौद्धिक काममा सफलता मिल्नेछ । दाम्पत्य सुखले प्रफुल्लित भइनेछ ।
सिंह– नयाँ कमको थालनी हुनेछ । धार्मिक यात्राको योगछ । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ । अचल सम्पत्ति हात पर्ला ।
कन्या– राजनैतिक कार्यमा बाधा आउनेछ । नाक तथा घाँटीमा समस्या आउला । सामान हराउने योग छ । अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्नसक्छ ।
तुला– धार्मिक कार्य सफल रहनेछन । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । श्रमको उचित मुल्याङ्न हुनेछ । दिनको उत्तरार्ध बढी सुखद् रहनेछ ।
याे पनि पढ्नुस आज कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
बृश्चिक– अधुरो काम पूरा हनेछ । व्यवसायका लागि यात्राको सम्भावना पनि छ । महिला वर्ग बाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । वैदेशिक कार्य अघि बढ्ने छ ।
धनु– आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो सफलता मिल्ला ।
मकर– अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्श गर्नु पर्ला । महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । घर परिवारमा झै–झमेलाको अवस्था आउला । फलदायी यात्रा नहोला ।
याे पनि पढ्नुस आज बुधवार कस्तो बित्दै छ तपाइको दिन? पढौं राशिफल
कुम्भ– आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ ।
मीन– नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउला । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल
बाँके दुर्घटनाः मृतक संख्या १२ पुग्यो
देश कोरोनाविरुद्व लड्दैं, राष्ट्रपति कार्यालयमा करोडको गलैँचा फेर्दै
बिहानै थपिए थप ३ जना संक्रमित
असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन शुरू हुँदै
कसरी ल्याइँदैछ स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई ?
नेपालमा थप ४३ जनामा देखियो कोरोना
बाँकेमा दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु, २२ जना घाइते
कोरोना भाइरस: कोरोनाभाइरसकै कारण मर्ने खतरा कति छ र हामी कतिसम्म डराउने?
अमेरिकामा दन्कियो आगो, सयौं गिरफ्तार, ४० बढी शहरमा कर्फ्यू
ASX reverses early losses, nudges positive territory
Average house prices declined 0.5 per cent in May according to CoreLogic data released this morning. This is bang on economist predictions and the first time CoreLogic recorded negative growth across the nation since June 2019. However, on an annual ...
Railways resumes operations partially, 1.5 lakh to board trains today
New Delhi: As railways resumes operations partially today, more than 1.45 lakh passengers will travel on 200 trains on day 1. As an important step in the graded restoration of passenger train services, Railways today (June 1) will start 200 trains in addition to ...
Jon “Bones” Jones tweeted Sunday that he's giving up his UFC title inapay dispute. “To the light-heavyweight title -- veni, vidi, vici,” tweeted Jones, using the Latin phrase of “I came, I saw, I conquered,” attributed to Julius Caesar. Asked if was giving up his ...
Attacks on Burkina Faso market and humanitarian convoy leave 35 dead as violence escalates
At least 35 people have reportedly been killed after separate attacks onacattle market andahumanitarian convoy in Burkina Faso duringaparticularly violent weekend in the volatile country. Key points: Deaths from unrest in Burkina Faso have reportedly ...
Protesters gathered in Santa Monica on Sunday in another day of unrest over the killing of George Floyd, leading toacurfew that took effect at4p.m.. They marched along Ocean Avenue peacefully, some carrying signs as police officers stood near the ...